Bato reZANU PF rinoti riri kushushikana zvikuru nemakakatanwa anotyisa pamwe nemhirizhonga iri kuitika mubato iri pamberi pesarudzo dza 2023.
Nepamusana pekusagadzikana kuri mubato iri, politburo yeZanu PF yakapa masimba vakafanobata chinzvimbo chemnurongi wemisangano, VaPatrick Chinamasa, masimba ekuranga vose vari kukonzera mhirizhonga nekuita misikanzwa mubato iri.
VaChinamasa vakapihwa simba iri nezuro mushure mekunge vakumbira simba nekuona kuwanda kwaita dambudziko iri mubato ravo.
VaChinamasa vanoti mhirizhonga nemisikanzwa zvin svibisa chimiro pamwe nekuti veruzhinji vashaye chivimbo nebato nekudaro zvakakosha kuti vanokonzeresa mhirizhonga varangwe nechimbichimbi, kunyange hazvo bumbiro rebato iri riine gwara rinotora nguva yakareba.
Asi VaChinamasa vati vese vanenge vasina kufara nemitongo yavo vanoramba vaine mukana wekupikisa mitongo yavo kudare rePolitiburo.
////////////Act 1 – Chinamasa/////////////////
VaChinamasa vati nyaya yemhirizhonga iri kunyanyotaurwa nezvayo ndeye kwaMutare uko dzimwe nhengo dzebato iri dzakaburitsirana pfuti pamusangano weProvincial Co-ordinating Committee. Vati vachaongoora nyaya iyi kana mapurisa apedza kuita basa rawo.
Mhirizhonga yakatekeshera mubato iri mumatunhu akaita seMidlands, Matabeleland North, Mashonaland West neHarare.
MuHarare sachigaro wedunhu iri, VaGoodwills Masimirembwa, vakatemwa necheya nemutevedzeri wavo, VaGodwin Gomwe, uye nyaya iyi yave kumatare edzimhosva.
KuBulawayo nhengo dzeZanu PF dzakaburitisirana pfuti svondo rapfuura dzichipomerana mhosva yekuparadza bato iri.
Musangano wePolitiburo wakakurudzira nhengo dzebato iri kuti dzibatane VaChinamasa vachiti kuronga kwavari kuita musangano nekuumba maCell kwakabudirira uye pave nemaCell anodarika zviuru makumi manomwe nemapfumbamwe nenhengo mamiriyoni matatu nemazana mapfumbwamwe ezviuru.
Vanoziva zviri kuitika vanoti muZanu PF maita zvikwata zviviri zviri kurwira masimba. Chimwe chikwata chinonzi chiri kutsigira mutungamiri webato iri nenyika, VaEmmerson Mnangagwa, chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo, VaConstantine Chiwenga.
Vamwe vakuru vakuru muZanu PF vanonzi havasi kufara kuti VaMnangagwa, avo vakasarudzwa pa extra ordinary congress yakaitwa muna Zvita 2017, havana kudaidzira kongiresi muna 2019 sezvinodiwa nebumbiro reZanu PF, sezvo nguva yaVaRobert Mugabe, yaifanirwa kupera muna 2019 mushure mekusarudzwa kwavakaitwa pakongiresi yemuna 2014.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo kusaitwa kwekongiresi yeZanu PF muna 2019, kunosiya VaMnangagwa vari mutungamiri weZanu PF zvisiri pamutemo webato, izvo zvisiri kufadza vakawanda mubato iri.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira, VaGibson Nyikadzino, vati danho ratorwa neZanu PF rinoratidza kuti bato iri rine chido chekupedza mhirizhonga.
Asi vati VaChinamasa vanoda rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri webato iri, VaEmmerson Mnangagwa, nevamwe vakuru vakuru mubato iri.
Mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vati havawoni sekuti dambudziko iri ringapera pari zvino sezvo rakatanga kare.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri weDemocratic Party, Dr Wurayayi Zembe, avo vanoti hapana achakwanisa kupedza mhirizhonga mubato iri.
VaMnangagwavakapinzwa pachigaro chavanacho muZanu PF nemauto ayo akabvisa VaMugabe pachigaro nechisimba muna Mbudzi 2017 mushure mekunge VaChiwenga vashandisa masimba avo apo vaive mukuru wemauto mukupidigura hurumende yaVaMugabe mushure mekunge VaMugabe mbune vadzinga VaMnangagwa semutevedzeri wemutungamiri webato, uye semutevedzeri wemutungamiri wenyika.
VaZembe vati zviri kuvana veZimbabwe kusarudza vatungamiri vasina mhirizhonga musarudzo dza2023 asi vakati kuti izvi zviitike, sarudzo dzacho dzinofanira kuongororwa nemasangano akaita seSADC, Africa Union pamwe neUnited Nations.